6/21/2014 06:27:00 PM story
မိန်းကလေးတိုင်းက စင်ဒရဲလားဖြစ်ချင်တဲ့ အိပ်မက်မျိုးကို မက်ဖူးကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
မွဲပြာခြောက်သွေ့တဲ့ဘဝမှာ ချောမောလှပတဲ့မင်းသားတစ်ပါး ကိုယ့်အနားလျှောက်လာပြီး လက်လက်ထနေတဲ့ဖိနပ်တစ်ရံ ကမ်းပေးလိုက်ချိန် မှော်ဆရာရဲ့ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ဘဝက ချက်ချင်းပဲ လင်းလက်လာခဲ့သလိုမျိုး….
အဲဒီလို စင်ဒရဲလားဖြစ်ချင်တဲ့မိန်းကလေးက လှပတဲ့ရုပ်ရည်၊ ကောင်းမွန်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာရှိရတယ်၊ အရေးအကြီးဆုံးက ရှေးဘဝမှာ ဘာအကုသိုလ်မှမလုပ်ခဲ့ဘဲ ဒီဘဝမှာ ဖြူစင်တဲ့ပုလဲလေးတစ်လုံးလို မင်းသားရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို စောင့်ဆိုင်းနေရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက နော်ဝေးအမျိုးသမီး Mette-Marit မှာ မရှိခဲ့တဲ့အရာတွေပါ။ Mette-Marit က ပြဿနာမိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ Party ကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၊ အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ ကလေးအမေတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ သူ့ကလေးရဲ့ဖခင် (သူနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်ဘဲ အတူနေသူ)က မကြာခဏ မူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် အဖမ်းခံရသူဖြစ်တယ်။ ဒီအချက်တွေအားလုံးက သူရဲ့စင်ဒရဲလားအိပ်မက်ကို ဖြိုဖျက်ပစ်နိုင်လောက်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်တယ်။ အိမ်ရှေ့မင်းသားရဲ့ခြေလှမ်းကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေဖြစ်တယ်။
ဒီအမျိုးသမီး Mette-Marit ရဲ့ဘဝက မွဲပြာခြောက်သွေ့လွန်းလို့ မည်းတောင်မည်းနေခဲ့ပါပြီ။
ရှေးဘဝကံက အခုဘဝကို ပြည့်စုံလှပစေသလား။ ဒါကို Mette-Maritမယုံခဲ့သလို နော်ဝေးအိမ်ရှေ့မင်းသား Haakonလည်း မယုံခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ကြိမ် သူတို့ထပ်တွေ့ဆုံချိန်မှာ သူတို့ရဲ့အကြည့်က တစ်ယောက်နားတစ်ယောက်မခွာခဲ့ဘူးဆိုတာကို သူတို့သိလိုက်တယ်။ သူတို့လိုချင်တာက အချစ်ပါ၊ အာဏာ၊ မျိုးရိုးနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ အချစ်ကိုပါ။ ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ တစ်သားတည်း နှစ်ယောက်အတူ ခိုင်ခိုင်မာမာ လက်တွဲခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ဟာ မျိုးရိုး၊ နောက်ခံ ဘာတစ်ခုမှမတူခဲ့ကြတဲ့ လူနှစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် သူတို့အချင်းချင်း ချစ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါကြောင့်လည်း နော်ဝေးရဲ့သတင်းစာပေါ်မှာ “ဒီလိုမတူညီတဲ့ပေါင်းစပ်မှုက မင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုတာထက် လူကို ပိုထူးဆန်းအံ့သြစေပါတယ်”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Mette-Maritနဲ့ နော်ဝေးအိမ်ရှေ့မင်းသားHaakonတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုက ရိုးရိုးလေးပါပဲ။
သာမန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာပါ။ မင်းသားHaakonချိန်းထားတဲ့မိတ်ဆွေ ရောက်မလာသေးပါဘူး။ ရွှေဝါရောင်ဆံနွှယ်နဲ့ အပြုံးချိုချို စားပွဲထိုးမလေးတစ်ဦးက ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်လာချပေးပြီး “ရှင့်ကို ကျွန်မတွေ့ဖူးတယ်”လို့ ဆိုပါတယ်။
စားပွဲထိုးမလေးက ဆက်ပြီး “လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်က Kristiansand ဂီတပွဲတော်မှာ ကျွန်မနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့ ရှင့်ကားနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့တယ်….”
အော်.. သူကိုး… မင်းသားHaakon သတိရလာပါတယ်။ ဒီမိန်းကလေးကို သူမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ဂုဏ်ရှိန်ထည်ဝါတဲ့ ဧည့်သည်တော်တွေကြားမှာ ဒီမိန်းကလေးက ရှန်ပိန်တွေပေးပို့လိုက် သုံးပြီးသားခွက်တွေကို သိမ်းလိုက်နဲ့ လူးလားခေါက်ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။ သန့်စင်ခန်းသွားတဲ့ ကော်ရစ်တာမှာ မျက်နှာဖြူဖပ်ဖပ်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီမိန်းကလေးကို သူတွေ့ခဲ့တယ်။ မိန်းကလေးကို သူထူပေးလိုက်တယ်။ နဖူးပေါ်မှာ ချွေးစေးတွေပြန်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို လူကြီးမင်းဆန်ဆန် “ဘာဖြစ်တာလဲ”လို့ သူမေးလိုက်တယ်။ မိန်းကလေးက အားနာဟန်နဲ့ ခေါင်းမော့ပြီး “ရုတ်တရက် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့”လို့ ဖြေတယ်။
ဂီတပွဲကနေ သူလည်းခွာတော့မှာမို့ ကားဆရာကိုခေါ်ပြီး မိန်းကလေးကိုပါ တစ်ပါတည်းလိုက်ပို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူမျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်တယ်။ မိန်းကလေးရဲ့နာမည်က Metteလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာကို သွားသတိရလိုက်မိတယ်။
ကိုယ့်နာမည်ကို ခေါ်တဲ့အသံကြောင့် Mette ထအော်မိမတတ် ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်။
“ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကျွန်မနာမည်ကို မှတ်မိနေပါလိမ့်”
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ညမှာ Mette အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာကို ခဏမေ့သွားပြီး သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့သူဟာ အိမ်ရှေ့မင်းသားHaakon ဖြစ်ကြောင်း ဖခင်ကို ဝမ်းသာအားရပြောပြခဲ့တယ်။
ဖခင်က အနည်းငယ်ဖောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ သမီးရဲ့ဗိုက်ကိုကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချခေါင်းခါပါတယ်။ မကြာခင် အိမ်ထောင်မရှိတဲ့ ကလေးအမေတစ်ဦးဖြစ်တော့မယ့် သမီးက ဘာကိုမှ စိုးရိမ်သောကရောက်မနေခဲ့ဘူး။ သူရဲ့အနာဂတ်လမ်း ဘယ်လိုဆက်လျှောက်မလဲ….
ဟုတ်ပါတယ်… အိမ်ရှေ့မင်းသားနဲ့ တစ်ကြိမ်သာဆုံခဲ့တဲ့ရေစက်က ဆိုးဝါးလှတဲ့ Metteရဲ့ဘဝကို ဘာတောက်ပြောင်မှုမှ မပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီကာလမှာပဲ သူဟာ Party Girl လုပ်ခဲ့တယ်။ မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ ချစ်သူနဲ့ အတူနေခဲ့တယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတော့ ချစ်သူစွန့်ပစ်တာကို ခံခဲ့ရတယ်။ သူဒီလောက် အားနည်းပျော့ညံ့နေတာတောင် စားပွဲထိုးလုပ်ပြီး ကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက် ငွေရှာခဲ့တယ်။
ကြီးပြင်းခြင်းဆိုတာ ဗိုက်ထဲမှာ ကလေးရှိနေပြီဆိုတဲ့ အချိန်ကစတယ်ထင်ပါရဲ့…
၃နှစ်ကာလအတွင်းမှာ သား Matthew ကို သူကိုယ်တိုင်ထိန်းကျောင်း ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Oslo တက္ကသိုလ်ကို တက်ရောက်ဖို့ သူစတင်ခဲ့တယ်။
နှစ်၊ လ၊ ရက်တွေရဲ့တိုက်စားမှုကို ခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ single motherဖြစ်တဲ့ Metteဟာ တစ်သားမွေး တစ်သွေးလှဆိုသလို ပိုဆွဲဆောင်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အဲဒီညက အိမ်ရှေ့မင်းသားHaakonရဲ့ မိတ်ဆွေရောက်မလာခဲ့ဘူး။ Metteက Haakonကို အဖော်လုပ်ပြီး Kristiansand မြို့လေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
စားသောက်ဆိုင်ကအပြန်မှာ နွေဦးရဲ့ပန်းတစ်ပွင့်လို လန်းဆန်းတဲ့မျက်နှာတစ်ခုက Haakonရဲ့ ခေါင်းထဲတဝဲဝဲ လည်နေခဲ့တော့တယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ စားသောက်ဆိုင်ရှေ့ Haakonရောက်လာခဲ့ပြီး Metteကို စောင့်ခဲ့တယ်။
“ခင်ဗျားနဲ့ ချိန်းတွေ့လို့ရမလား”လို့ က Haakonမေးတယ်။
“ရတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိစ္စတချို့ကို ရှင်သိထားဖို့လိုတယ်”လို့ Mette ကဆိုတယ်။
အဲဒီနေ့က ကော်ဖီဆိုင်လေးတစ်ခုမှ Metteက Haakonကို သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေ ပြောပြနေခဲ့တယ်။ သူ ၁၁နှစ်အရွယ်မှာ မိဘတွေအိမ်ထောင်ကွဲတယ်။ ဘော်လီဘောကစားရတာကို သူနှစ်သက်တယ်၊ ကစားသမားဘဝကနေ နည်းပြဖြစ်တဲ့အထိ သူကစားခဲ့တယ်။ သူ တက္ကသိုလ်မတက်ခဲ့ဖူးဘူး။ Party Girl ဘဝနဲ့ နေ့ညပြောင်းပြန် သူရူးမိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဆေးသမားတစ်ယောက်နဲ့ အတူနေခဲ့ဖူးတယ်။ အိမ်ထောင်မကျဘဲ ကလေးတစ်ယောက် မွေးခဲ့တယ်…..
Haakonက Metteရဲ့ လက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး “ပြောသွားပြောလာလည်း အဲဒီ ပိုးထိုးတဲ့အကြောင်းတွေပဲလား”လို့ ပြောတယ်။
Metteရဲ့မျက်လုံးတွေ အရောင်မှိန်ကျသွားပြီး “ကျွန်မ ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကို ရှင်သိထားဖို့လိုတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ကျွန်မတို့ နစ်သထက်နစ်ပြီး ပြန်ရုန်းထွက်တဲ့အချိန်မှာ ရှင်ရော၊ ကျွန်မရော ပိုကြေကွဲထိခိုက်ကြလိမ့်မယ်”
အိမ်ရှေ့မင်းသား Haakonက ဒီသူ့မျက်စိရှေ့က မိန်းကလေးဟာ လှပရုံတင်မက အသိဉာဏ်လည်းရှိတယ်လို့ တွေးလိုက်တယ်။
“အရင်တုန်းက ခင်ဗျားဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကျွန်တော်မမေးဘူး။ အနာဂတ်ကိုပဲ ခင်ဗျားနဲ့အတူ ကျွန်တော်လျှောက်လှမ်းချင်တယ်”
ဒါဟာ အကောင်းဆုံး မေတ္တာစကားတစ်ခွန်းပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီစကားကို Metteမျက်ရည်ဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ရင်ထဲထည့်သိမ်းထားလိုက်တယ်။ တကယ်လို့ မင်းသားနဲ့သူတွေ့ဆုံချိန်မှာ သူသာ စက္ကူတစ်ရွက်လို ဖြူစင်နေခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲလို့ သူနောင်တမရခဲ့တော့ပါဘူး။
အတိတ်ကိုပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်တော့ရင် အခုလက်ရှိကိုပဲ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားရတော့မယ်။
credit to : Nine Nine Sanay အပြည့်အစုံသို့ »
6/16/2014 05:40:00 PM story
5/27/2014 09:43:00 PM funny story
ဖိုးဇော်(၂၂-၂-၂၀၁၃) အပြည့်အစုံသို့ »
5/24/2014 06:32:00 PM story
သက်တန့်ချို အပြည့်အစုံသို့ »
5/22/2014 04:57:00 PM story
5/16/2014 06:49:00 PM story
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကများ တွင် နောက်ခံသမိုင်းပုံပြင်များရှိနေပါသည်။
မြောက်ဦးခေတ်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ရခိုင်ငစွေအက၏နောက်ကွယ်တွင် ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းတစ်ခု ရှိခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အခါတွင် ရခိုင်ငစွေအကမှာ တိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ်ခါနီးဖြစ်သည့်အတွက် ''မြောက်ဦးဘုရင်နှင့် ငစွေအက'' သမိုင်းပုံပြင်ကို လေ့လာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါ သည်။
''ငစွေအကက တော်တော်လေးရှားသွားပြီ။ မှတ်မှတ် ရရ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းက ရွာမှာလာကပြတာတွေကို မြင်ဖူးတယ်။ အခု ကနိုင်တဲ့သူ တော်တော်လေးရှားနေပြီ'' ဟု အသက် ၂ဝကျော်အရွယ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ရှေးရခိုင်ဘုရင် သီရိသုဓမ္မရာဇာသည် မြောက်ဦးထီး နန်းကို စိုးစံခဲ့ပြီး မြောက်ဦးမင်းဆက် ၂ဝမြောက် ဘုရင် တစ်ပါးဖြစ်ကာ ငယ်ရွယ်သောမိဖုရားတစ်ဦးကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ သူ၏မိဖုရား နတ်ရှင်မယ် မှာ ငယ်ရွယ်လှပပြီး မာန်မာနကြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက် အို မင်းသော ဘုရင်မင်းမြတ်၏ အပြော၊ အမိန့်များမှာ သူ့ကို နှိမ်သည်ဟုထင်မှတ်ပြီး မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။
အဲဒီအချိန်တွင် လောင်းကြက်မြို့ကို အပိုင်စားရသော လောင်းကြက်စား ငကုသလမှာ မင်းအဖြစ်ကိုလိုချင်သော ကြောင့် မိဖုရားနှင့်ပူးပေါင်း၍ ဘုရင်ကိုအနိုင်ယူရန်စီစဉ် လေသည်။
လောကီအတတ်ပညာများတွင် ''နံတူသတ်ရအနိုင် ရ''ဆိုသည့်အတိုင်း အင်္ဂါသားဖြစ်သော ဘုရင်သီရိသုဓမ္မာ ရာဇာကို သတ်လိုသောကြောင့် လောင်းကြက်စား ငကုသ မှာ နန်းတော်ထဲတွင် အင်္ဂါနံ ငါးစွေ(ငစွေ)အား ဖမ်းယူ သတ်ဖြတ်သည့်ဇာတ်လမ်းကိုတီထွင်၍ နန်းတွင်းတွင် တင် ဆက်ကပြလေသည်။ ငစွေ(ငါး)ကို နှိုက်ပုံ၊ ငစွေ အဖမ်းရ ခက်ပုံ၊ ငစွေက အမြီးတရမ်းရမ်း ခေါင်းတရမ်းရမ်းဖြစ်နေ ပုံ၊ ငစွေသားကို အလွန်မတန်စားပြီး ဝမ်းပျက်ရပုံတွေကို ဖွဲ့နွဲ့ပြီး ဘုရင့်အား ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ လောင်းကြက်စား ငကုသလမှ စတင်တီထွင် ခဲ့သော ငစွေကခြင်းဓလေ့မှာ ယနေ့တိုင် ရခိုင်အမျိုးသား တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်အဖြစ် ရှင်သန်လာခြင်းဖြစ်သည်။
''လောင်းကြက်စားအမတ် ငကုသလက ဘုရင်ကို နာမ်နှိမ်တဲ့အနေနဲ့ အဲဒီအကကို စထွင်ခဲ့တယ်။ နောက် ပိုင်းမှာ တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတာကို အုပ်ချုပ်သူတွေ သိအောင် နန်းတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကို ဘုရင်သိအောင် တင်ဆက်ကပြလာပါတယ်။ ဗမာလိုဆိုရင် ကွက်စိပ်ပေါ့။ ကွက်စိပ်နဲ့ မတူတာက ကွက်စိပ်က အသံနဲ့ပဲသရုပ်ဆောင် ရတာ။ ငစွေအကကတော့ လူတစ်ယောက်တည်းကပဲ ဘုရင် ဆို ဘုရင်၊ မိဖုရားဆို မိဖုရား လူကိုယ်တိုင်ပါ သရုပ်ဆောင် ပြရပါတယ်''ဟု ရခိုင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ ဒေါ်အေး အေးဇံက ပြောသည်။
လောင်း ကြက်စားငကုသလကို မိဖုရားက ချစ်ခင်စုံမက်သောကြောင့် ငကုသလနှင့် မိဖုရားနတ်ရှင်မယ်တို့ပူးပေါင်းပြီး ဘုရင်အား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်လိုက်လေသည်။
သီရိသုဓမ္မာရာဇာဘုရင် နတ်ရွာစံပြီးနောက် သား တော် မင်းစနေမြောက်ဦးနန်းကို စိုးစံတော်မူသည်။ ဘုရင့်သားတော် မင်းစနေကိုလည်း နန်းသက် ၂ဝ ရက်မြောက်တွင် အဆိပ်ခတ်ကာသတ်ဖြတ်လိုက်ပြီး လောင်း ကြက်စား ငကုသလမှာ ဘုရင်နရပတိကြီးအမည်နဲ့ မြောက် ဦးထီးနန်းကို ခုနစ်နှစ်တိုင်တိုင် စိုးစံခဲ့သည်။
ဘုရင်နှင့် ဘုရင့်သားတော်ကို သတ်ဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိဖုရားနတ်ရှင်မယ်ကိုပင် မိဖုရားမြှောက်ခဲ့သည်။ ငကုသလသည် နောင်အခါတွင် မိမိအား ဘုရင်ကဲ့သို့ပင် မိဖုရားက လုပ်ကြံမည်စိုး ရိမ်ပြီး မိဖုရားအရာမှချကာ နန်းတော်မှ နှင်ထုတ်လိုက် လေသည်။
''မိဖုရားကတော့ သူ့သားကိုသတ်မှာမဟုတ်လောက် ဘူး။ မင်းစနေကိုကျွေးမယ့်အစာထဲမှာ အဆိပ်ပါမယ်မှန်း မသိလို့ ဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်။ အဲဒီမိဖုရားက အခုထိ မကျွတ်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်''ဟု ရခိုင်တိုင်းရင်းသူ တစ်ဦးကပြောသည်။
ဘုရင်အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်သောမိဖုရား သည် သူတစ်ပါးအားမကောင်းကြံသောစိတ်ကြောင့် သား တော်၏အသက် သေဆုံးရုံမျှမက ကိုယ်တိုင်လည်း မိဖုရား အရာမှချကာ နန်းတော်မှနှင်ထုတ်ခံသည်အထိ ပြစ်ဒဏ် ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
လောင်းကြက်စားငကုသလ နောင်မြောက်ဦးဘုရင် နရပတိမင်းတီထွင်ခဲ့သော ငစွေအကမှာ တစ် ယောက်တည်း ကပြရသောအကဖြစ်သည်။ ကွက်စိပ်ကဲ့ သို့ အသံပေါ်မူတည်သည့် ဘုရင်ဖြစ်သည့်အခါ ဘုရင် အဝတ်၊ မိဖုရားဖြစ်သည့်အခါ မိဖုရားအဝတ်၊ သရဖူကို စက္ကူနဲ့ ပြုလုပ်တင်ဆက်လေ့ရှိပြီး ဓားကိုမူ အနီးနေအိမ်မှ ငှားယူလေ့ရှိသည်။
ဘုရင်လုပ်သည့်အခါ ရာဇပလ္လင်မှာ ဆန်ဖွပ်သည့် ဆုံထက်တက်ထိုင်ပြီး အမတ်ကြီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင် သည့်အခါ ဆုံပေါ်မှဆင်း၍မြေကြီးပေါ်တွင် ဒူးထောက် ကာ လက်အုပ်ချီလျက် သရုပ်ဆောင်ရသည်။
ငစွေအကကို ကျေးလက်တောရွာများတွင် လယ် သမားများ တလင်းသိမ်းချိန်၊ ရွာသားများ အားလပ်ချိန် ကိုရွေးချယ်၍ ကပြကြသည်။
ယင်းအကကိုကပြသောသူတွင် လွယ်အိတ်တစ်လုံး နှင့် ထီးတစ်ချောင်းသာပါပြီး ကျေးရွာလူကြီးအိမ်တွင် တည်းခိုကာ ရွာသားများကိုစည်းရုံးလျက် ကပြရသည်။ပွဲကြည့်သူများက စေတနာရှိသလောက် အခကြေးငွေ အဖြစ် ဆန်တစ်ဘူးကျစီလှူဒါန်းကြကြောင်း သိရသည်။
''ကျွန်တော်ကတော့ ငစွေအကကို အသက်ရှစ်နှစ် ကိုးနှစ်လောက်က နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငစွေက တဲ့သူက တော်တော်လေးတော်တယ်။ ဘုရင်လဲသူပဲ။ မိ ဖုရားလဲ သူပဲ။ တော်တော်လေးရယ်ရတယ်။ အခု အဲဒီ အကက ရှားနေပြီ''ဟု အသက် ၃၆နှစ်အရွယ် ရခိုင်တိုင်းရင်း သားတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ငစွေနှိုက်တာကိုကပြနိုင်ရန် လိုအပ်ချက် ၁ဝ ချက် ရှိပြီး ယင်းတို့မှာ မောင်းတစ်လုံး၊ ဝါးဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော ရက်သဲ့တစ်ခု၊ ငါးထည့်ရန် ဝါးပလိုင်းတစ်လုံး၊ ဆန်ဖွပ် သည့်ဆုံတစ်လုံး၊ ဆန်ဖွပ်ရန် ကျည်ပွေ့တစ်ချောင်း၊ လှော် တက်တစ်ချောင်း၊ ဆန်တစ်ခွက်၊ ငှက်ပျောသီး၊ အုန်းသီး၊ ကွမ်းသီး၊ ဆေးလိပ်စုံကန်တော့ပွဲတစ်ပွဲ၊ ကပြရန်အသင့် အတင့်ကျယ်ဝန်းသော မြေတလင်းတစ်ခု၊ ဖျာကြမ်းတစ် ချပ်တို့လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ငစွေကပြသူသည် ငါးစွေနှိုက်ရန် သူငယ်ချင်းများနှင့် သွားပုံ၊ ငါးရှာရင်း လမ်းမှာ တိုင်းပြည်နိုင်ငံဖြစ်ပျက်ပုံများ၊ လက်ရှိ ရွာရဲ့ဒုက္ခများ၊ နန်းတွင်းဖြစ်နေသည့် ပြဿနာ များကို ရယ်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာများကို ပေါ်လွင်အောင် သရုပ်ဆောင်ဟောပြောရသည်။ စကားပြောင်၊ စကား ပျက်များနဲ့ပြသသွားသဖြင့် လူများနှစ်ခြိုက်ကာ ယနေ့တိုင် အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
မြောက်ဦးခေတ်တွင် ငစွေဆရာဘာရဲ့ဘဟု ကျော် ကြားခဲ့သူမှာ မင်းပြားမြို့နယ် ဗူးပင်ရွာသားဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ယင်းငစွေဆရာ၏ငစွေနှိုက်အခြင်း(တေးသီချင်း) များမှာ ယခုအချိန်အထိ ခေတ်စားနေဆဲဖြစ်သည်။
ငစွေအကမှာ ခေတ်အဆက်ဆက် တောရွာများတွင် ခေတ်စားခဲ့ပြီး ယခုအခါငစွေကတတ်သူများရှားပါးလာ ကြောင်းသိရသည်။
သို့ဖြစ်၍ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေး မှုအကတစ်ခုဖြစ်သော ငစွေအကသည် မူလအစမှာ ရည် ရွယ်ချက်မကောင်းသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံအ တွင်းဖြစ်ပျက်နေသောဖြစ်ရပ်များကို ထင်ဟပ်စေသော ရိုးရာအကဖြစ်လာသောကြောင့် ရခိုင်ဘုရင်များပင် ကြည့် ရှုခဲ့ရသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်၍ ရေရှည်တည် တံ့ အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေကြောင်း ရည်ရွယ်ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် ဦးရွှေဇံ၊ ရခိုင်သမိုင်းအလင်းပြကျမ်း၊
5/10/2014 10:01:00 PM story tips
5/09/2014 03:16:00 PM story
ဆလုံလူမျိုးများတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းပုံပြင်၊ သမိုင်းတင်ထိုက်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါသမိုင်းပုံပြင်သည် ဆလုံလူမျိုးများဘဝတိုး တက်ရေးအတွက်လာဘ်မစားဘဲ အသက်ကိုစွန့်၍ မူးယစ် အန္တရာယ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည့် ''လူမျိုးအတွက်အသက် စွန့်ခဲ့သော ဆလုံသူရဲကောင်းဗိုလ်လုံးနီ''၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ကြိုး ပမ်းမှုပင်ဖြစ်ပါသည်။
''ကျွန်တော်တို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာ ဆလုံ လူမျိုးများဘဝတိုးတက်ဖို့ ဆလုံလူမျိုးဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လေး လုပ်ထားပြီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားပါတယ်။ဆလုံတွေက အရက်သောက်တယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးလဲသုံး ကြတယ်''ဟု ဆလုံလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးဥက္ကဋ္ဌ၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး သစ်တောနှင့်သတ္တုဝန်ကြီး ဦးတင်စိုးက ပြောပြသည်။
ဆလုံလူမျိုးများသည် ရေကူး၊ ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်ကြ ပြီးပင်လယ်ကြမ်းပြင်အောက် ၁၆လံအထိ ရေငုပ်ကိရိယာ မပါဘဲ ငုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တစ်ခါငုပ်ရင် ၁၅မိနစ်၊ မိနစ် ၂ဝ အထိ ငုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ရေငုပ်ကျွမ်းကျင်သောကြောင့် ရေအောက် ရှိသယံဇာတများကို ရှာဖွေရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြသည်။
ဆလုံလူမျိုးများသည် ရိုးသားသူများဖြစ်၍ မြန်မာ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင် ကိုလိုနီခေတ်တွင် ပင်လယ်ရေ အောက်သယံဇာတများကို ဈေးပေါပေါဖြင့်ရယူလိုချင်သည့် ဗြိတိသျှများ၏လှည့်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ရေအောက်မှာ အချိန်ကြာကြာရေငုပ်နိုင်စေရန်ဆို သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဆလုံများကို ဘိန်းအလကား ကျွေးခဲ့ရာနောက်ပိုင်းတွင် ဘိန်းရရှိရန်အတွက်မြန်မာ့ပင် လယ်အတွင်းရှိ ငှက်သိုက်၊ ငါးကြီးအံဖတ်၊ သစ်မွှေး၊ ပုလဲ စသည့် အဖိုးတန်ရတနာများစွာဖြင့် လဲလှယ်ကြရတော့ သည်။
ဆလုံလူမျိုးများသည် ဘိန်းစွဲသူဦးရေများပြားလာ ကာ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးများချို့ယွင်းလာ ပြီး သက်စွန့်ဆံဖျားရှာဖွေထားသော သဘာဝပုလဲသည် ဘိန်းဖိုးတစ်ပတ်စာသာရရှိလေသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆလုံလူမျိုးများ အခက်ကြုံနေချိန်တွင် ဆလုံအမျိုးသား လုံးနီဆိုသည့် လူငယ်လေးတစ်ဦးပေါ် လာသည်။ သူသည် ဘိန်းရဲ့ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိပြီး ဘိန်း ကိုရှောင်ရန် ဆလုံအမျိုးသားများကိုစည်းရုံးသော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
ဗြိတိသျှများကိုလည်း ဘိန်းမရောင်းရန်ပြောသော် လည်းမရသဖြင့် လက်နက်ကိုင်ကာ ပုန်ကန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် သည်။ မောင်လုံးနီမှ ဗိုလ်လုံးနီဖြစ်လာပြီး ဗိုလ်လုံးနီလက် အောက်သို့ ဆလုံအမျိုးသားများ အလုံးအရင်းဝင်ရောက် လာပြီး ဗြိတိသျှဘိန်းတင်သင်္ဘောများကို တိုက်ခိုက်ကြ သည်။
ဘိန်းတင်လာသော သင်္ဘောများကမ်းရိုးတန်းက မဖြတ်ဝံ့ဘဲ ဘိန်းခန်းများတွင် ဘိန်းပြတ်လပ်သွားသည်။
ကျွန်းပေါင်း ၈ဝဝ ရှိသော ကျွန်းစုများကို ကျွမ်းဝင် နေသည့် ဗိုလ်လုံးနီကိုဖမ်းဆီးရန် ခက်ခဲနေသဖြင့် ဗြိတိသျှ များက ရာထူးပေးပြီး စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရာ ဗိုလ်လုံးနီက လက်မခံဘဲ ဘိန်းလုံးဝမရောင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဗိုလ်လုံးနီတပ်သားများသည် ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းမှု၊ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးမှုများကြောင့် တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်း လာချိန်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရက ဗိုလ်လုံးနီကို ဖမ်းဆီးရန် ဆုငွေကျပ် ၁ဝဝ ထုတ်လိုက်ရာ မကြာမီမှာပင် ဗိုလ်လုံးနီမှာ သူ့သဘောနဲ့သူ အဖမ်းခံလေသည်။
ဖမ်းဆီးရရှိသည့် ဆလုံသူရဲကောင်းဗိုလ်လုံးနီကို ပင် လယ်ကမ်းစပ်တစ်နေရာတွင် သေနတ်ဖြင့်ပစ်ပြီး အဆုံးစီ ရင်လိုက်သည်။ ဆလုံလူမျိုးအားလုံးအတွက် သူရဲကောင်း လုံးနီမှာ အသက်ကိုပင်စွန့်၍ ဘိန်းကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင်လည်း ဆလုံဒေသသည် မူး ယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ ဆလုံမျိုးနွယ် များမှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့်စီးပွားရေးများ တိုးတက် ရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်းသိရသည်။
''မသမာသူတွေက သူတို့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအောင် လုပ်ပြီး သူတို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ လဲအောင်လုပ်ကြတယ်။ ဘိန်း စွဲတာကတော့ ရိုးရာလိုဖြစ်နေပြီ။ မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင် အောင် ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။ သက် ဆိုင်တဲ့မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရဲမှူးတွေ၊ နယ်လှည့်ဆေးကုသပေးတဲ့ အဖွဲ့တွေက လာဟောပြောကြတယ်။ လူမျိုးတစ်မျိုးကို မြှင့်တင်ဖို့ အချိန်ယူရမယ်။ အသိပညာပေးရမယ်''ဟု ဝန် ကြီးဦးတင်စိုးက သုံးသပ်သည်။
ရိုးသားသောဆလုံတိုင်းရင်းသားများကို မူးယစ်ဆေး ဝါး၏ ကျေးကျွန်အဖြစ် သွတ်သွင်းနေသူများအား နိုင်ငံ တော်မှ အရေးယူထိန်းသိမ်းပေးမှသာလျှင် ဆလုံမျိုးဆက် များပျောက်ပျက်သွားခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသခံကိုသန်းဆွေကလည်း ''ဆလုံ အမျိုးသားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲကြတယ်။ ရှေ့ဆက် ပြီး ဆလုံလူမျိုးတွေ မူးယစ်ဆေးဝါးမသုံးအောင်ဆိုရင် မူး ယစ်ဆေးစွဲအောင်ဖန်တီးနေသူတွေ၊ ရောင်းနေတဲ့သူတွေ ကို စာရင်းနဲ့တကွဖမ်းပြီး အရေးယူဖို့လိုပါတယ်။ ဆေးစွဲနေ သူတွေကိုဆေးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဆလုံ နယ်မြေမှာနေတဲ့ ဗမာတွေကလဲ ဆလုံလူမျိုးတွေကို ဝိုင်း ဝန်းထိန်းသိမ်းပြီး ကူညီပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်''ဟုပြောသည်။
ဆလုံလူမျိုးများကို မော်ကင်းဟုခေါ်ပြီး ယခုအခါ ဆလုံလူမျိုးအများစုသည် နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမှ ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာများ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်လာ ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်မှ ဆလုံကျေးရွာများထူထောင်ပေး ထားသဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်ခရိုင်နှင့် ကော့သောင်း ခရိုင်အတွင်းရှိ ကျွန်းစုကျွန်းတန်းများတွင် မှီတင်းနေထိုင် လျက်ရှိသည်။
''အစ်မတို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝနှစ်လောက်က ဆလုံဒေသကို ကော့သောင်းကနေတစ်ဆင့် သွားတုန်းက ဆလုံတွေက အဝတ်အစား အပြည့်အစုံမဝတ်ထားဘူး။ အပေါ်ပိုင်းမှာ အင်္ကျီသိပ်မဝတ်ကြဘူး''ဟု တနင်္သာရီဒေသတွင်နေထိုင်ပြီး ဆလုံကျွန်းသို့ရောက်ဖူးသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြ သည်။
ဆလုံလူမျိုးများသည် ၁၉၉၆၊ ၉၇ ခုနှစ်များတွင် ပြည့် စုံသော ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းများမရှိဘဲ ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်မှ စတင်၍ အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်လာကြကြောင်းနှင့် အစိုးရသစ်တက်ပြီး နောက်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနေ ဆလုံလူမျိုးများကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်များ ပြုလုပ် ခြင်း၊ ဆလုံကျေးရွာများတွင် စာသင်ကျောင်းများဆောက် လုပ်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
''နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်တွေကို အစိုးရသစ်တက် လာပြီး ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်းစုမှာဆိုရင် ၂ဝ၄ ခု၊ ကော့သောင်းခရိုင်မှာဆိုရင် ၆ဝဝ လောက်လုပ်ပေးထား ပါတယ်''ဟု တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဆလုံလူမျိုးများ၏ လူဦး ရေ အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသောကြောင့် ဆလုံလူမျိုး များဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် မူးယစ်ကင်းစင်ရန်လိုအပ်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကာ ပညာထူးချွန်သော ဆလုံစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များပေါ်ပေါက်လာစေရန် နိုင်ငံတော်မှ စောင့်ရှောက်ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်နေသည်။
သို့ဖြစ်၍ ပင်လယ်ပျော်ဆလုံမျိုးဆက်သစ်များသည် ကျဆုံးသွားသော ဆလုံသူရဲကောင်းဗိုလ်လုံးနီမျှော်လင့် ထားသလို နောင်တစ်ချိန်တွင်ဘိန်းသုံးစွဲမှုလုံးဝကင်းစင် ပြီး ပညာရေးအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ သူ များဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုရေးသားလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။
Yangon Times Journal | အတွဲ ၁၀ - အမှတ် ၁၇
5/06/2014 10:39:00 AM ghost story strange-news
5/02/2014 06:27:00 PM story
4/27/2014 08:12:00 AM story
တစ်ခါတုန်းက ဥာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီး အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ ပညာရှိကြီးတစ်ဦး ရှိပါတယ်.
သူဆီကို တစ်နေ့မှာတော့ အိမ်မီးလောင်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာရာကို ဆုံးရှုံးသွားလို့
စိတ်ပျက်အားလျော့စွာနဲ့ ၀မ်းနည်း ပူဆွေးပြီးငိုကြွေးနေတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်
ပညာရှိကြီးက ထိုလူငယ်ကို ရေတစ်ဖန်ခွက် သွားယူခိုင်းပြီး ဆားတစ်ဆုပ်ကိုလဲ ယူလာခိုင်းပါတယ်.
ရေဖန်ခွက်ထဲကို ဆားတစ်ဆုပ် ထည့်လိုက်ပြီး ရောမွှေလိုက်ကာ ထိုလူငယ်ကို သောက်စေပါတယ်.
ပြီးတော့ဘယ်လိုအရသာမျိုး ရှိသလဲလို့ မေးတဲ့အခါ ထိုလူငယ်က “ခါးတူးနေအောင် ငံပါတယ်”. လို့
ဒီတော့ ပညာရှိကြီးက အသာပြုံးလိုက်ရင်း ထိုသူကို ဆားတစ်ဆုပ်ကို ယူလာခဲ့ပါလို့ ခိုင်းလိုက်ပြီး
သူနဲ့အတူ လမ်းလျှောက်ဖို့ မြို့ပြင်ဘက်ကို ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်.
မြို့အပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက်လာကြရင်း အလွန် ကျယ်ပြောပြီး ကြည်လင်လှတဲ့
ဒီအခါမှာ ပညာရှိကြီးက ထိုလူငယ်လက်ထဲမှာ ပါလာတဲ့ဆားတစ်ဆုပ်ကို ရေကန်ထဲ
ပစ်ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်.. ပြီးတော့လူငယ်ကို “ကဲ အခု ကန်ထဲကို ရေကို သောက်ကြည့်ပါဦး” လို့
ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါ ထိုလူငယ်ကလည်း ကန်ထဲကရေကို လက်ခုပ်နဲ့ ခပ်ယူပြီး သောက်လိုက်ပါတယ်.
ပညာရှိကြီးက လူငယ် ရေသောက်ပြီးတဲ့အခါ “အခုရော ကန်ထဲက ရေက ဘယ်လိုအရသာ ရှိသလဲ” လို့
ဒီတော့ လူငယ်က “ လတ်ဆတ်ပြီး ချိုမြတဲ့ သောက်ရေရဲ့ နဂိုအရသာ အတိုင်းပါဘဲ” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်.
“စောစောတုန်းက ရေခွက်ထဲကို ဆားထည့်ပြီး သောက်လိုက်သလို ငံသေးရဲ့လား” လို့ ပြန်မေးပြန်တဲ့အခါ
“ မငံတော့ပါဘူး.” လို့ လူငယ်က ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်..
ဒီတော့မှ ပညာရှိကြီးဟာ လူငယ်လေးရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပုခုံးကို အသာအယာပုတ်လိုက်ကာ
“ငါတို့ဘ၀တွေရဲ့ ထိခိုက်နာကျင်မှု၊ ဆုံးရှုံးခါးသီးမှုတွေဟာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် ဆားနဲ့တူပါတယ်.
ဘ၀မှာ ကြုံလာတဲ့ နာကျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ခံစားရတဲ့ အတိုင်းအတာဟာ မင်းက ဘယ်လိုခွက်မျိုးနဲ့
ခံယူမလဲ ဆိုတာနဲ့ဘဲ သက်ဆိုင်တယ်..
မင်းက ခွက်သေးသေးနဲ့ ခံယူမယ်ဆိုရင် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကို သိပ်ကို ကြီးမားတယ်လို့ မင်းထင်လိမ့်မယ်.
ရေကန်လို ကျယ်ပြောလှတဲ့ ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ခံယူမယ်ဆိုရင်
အဲဒီဆုံးရှုံးမှု၊ စိတ်ထိ ခိုက်နာကျင်မှုတွေဟာ ဘာမှ ပြောပလောက်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်နာကျင်မှု
“ ဒီတော့ ဘ၀မှာ ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ နာကျင်ခါးသီးတာတွေ ကြုံလာတိုင်း
ခွက်ကြီးကြီးနဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖန်ခွက်တစ်လုံး မဖြစ်စေပါနဲ့.. ရေကန်တစ်ကန်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ကျင့်ကြံလိုက်ပါ.
ဒီလိုဆိုရင် နာကျင်ခံစားနေရတာတွေဟာ ရေကန်ထဲရောက်သွားတဲ့ ဆားတစ်ဆုပ်လို
လျှော့ပါးသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.
“Stop beingaglass. Becomealake.” တဲ့။
ငါတို့လဲ ဘ၀မှာ ကြုံလာတဲ့ ခါးသီးနာကျင်မှုတွေကို ရေဖန်ခွက်လေးနဲ့ မခံယူဘဲ
ရေကန်ကြီးနဲ့ ခံယူနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်လှတယ် မဟုတ်ပါလား………
MWD အပြည့်အစုံသို့ »
4/11/2014 04:02:00 PM story
myanmar consumer အပြည့်အစုံသို့ »
4/11/2014 03:35:00 PM story
4/11/2014 03:32:00 PM story
credit : original writter အပြည့်အစုံသို့ »
နည်းစနစ်ကျကျအတွေးအခေါ် အပြည့်အစုံသို့ »
4/10/2014 04:37:00 PM story
4/05/2014 01:13:00 PM story
4/04/2014 08:18:00 PM story
3/23/2014 10:54:00 AM story
နိုင်းနိုင်းစနေ (Sunday, June 29, 2008) အပြည့်အစုံသို့ »
ခေတ်သစ် မီးခွက် အာလာဒင်
3/20/2014 06:15:00 PM story
ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦး အိမ်ရှေ့ က မြက်ခင်းပြင်မှာပဲ ဂေါက်ရိုက်နေပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးသည်ကို သင်ပေးနေတာပါ။ အမျိုးသမီး ဖြစ်သူ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဂေါက်သီးဟာ တစ်ဖက်အိမ်က ပြတင်းပေါက် သွားထိပါတယ်။
ဒီတော့ အမျိုးသားက "မင်းကိုပြောသားပဲ။ သေချာဂရုစိုက်ရိုက်ပါလို့။ ခုတော့ ငါတို့ သွားတောင်ပန်ရတော့မယ်" လို့ပြောပြီး တစ်ဖက်အိမ်ကို တောင်းပန်ဖို့ သွားပါတယ်။
တံခါးပေါက် တစ်ချက်ပဲ ခေါက်ရသေးတယ် အထဲက အဖိုးအို တစ်ဦးမှ နွေးထွေးပြူငှာစွာပဲ ကြိုဆိုတယ်။ အံ့သြစွာနဲ့ပဲ အထဲဝင်တော့ ထိုင်ခုံမှာ အေးဆေးထိုင်စေပါတယ်။ ကွဲသွားတဲ့ ပြတင်းပေါက် ကလည်း ပြန်ပြင်ပြီးသားဖြစ်ပြီး ဘေးမှာ မှန်အကွဲ တစ်ချို့ ကို စုပုံထားပါတယ်။
"ကွဲသွားတဲ့မှန်အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘာပြန်လုပ်ပေးရ မလဲခမျာ" လို့ အမျိုးသားက မေးတော့ အဖိုးကြီးက အောက်ပါ အတိုင်း ပြန်ဖြေပါတယ်။
"မလိုဘူးဗျ။ အမှန်တော့ ကျနော်ကတောင် ခများတို့ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ ကျနော်က ဒီအိမ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ မီးခွက်စောင့် နတ်တစ်ပါးပါ။ ကျနော် ဒီအိမ်မှာ ပိတ်မိနေတာ နှစ် ၄၀၀ ကျော်ပြီ။ ခု ခများတို့ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဂေါက်သီးက မှန်လာကွဲစေလို့သာ ကျနော်လွတ်ရတာပါ။
ဒီတော့ ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ နှစ်ယောက်ကို ဆု တစ်ခုစီ တောင်းခွင့်ပေးမယ်။ ကျနော်လည်း မိတ်ဆွေတို့ဆီကနေ ဆုတစ်ခု ပြန်တောင်းမယ်။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ပေါ့"
ဒီတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ပဲ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်း အလိုအလျောက်ငွေပုံမှန် ဝင်နေစေဖို့ ဆုကို ပေးဖို့တောင်းပါတယ။် အမျိုးသမီးကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဇိမ်အကျဆုံး အိမ်တစ်လုံးနဲ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း များစွာ ရှိချင်တယ်လို့ တောင်းပါတယ်။
"ဟုတ်ပြီ။ တစ်နှစ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သန်းဝင်ပြီး ဘယ်တော့မှ မဆင်းရဲစေရအောင် ဆုတွေ ပြည့်စေမယ်။ ဒီက အမျိုးသမီးကိုလည်း နတ်စည်းစိမ်လို့ ပြည့်စုံလှတဲ့ အိမ်တစ်လုံးနဲ့ အစေခံကောင်းများ ရစေပါမယ်။ အပိုဆုအနေနဲ့ နှစ်ဦးစလုံး ဘေးမသီ၊ရန်မခ အသက်ရှည် ကျန်းမာစေရမယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ကျနော်လိုချင်တဲ့ ဆုကို ပြန်တောင်းမယ်။
ကျနော်က ဒီအိမ်မှာပိတ်နေတာ နှစ် ၄၀၀ မကတော့ဘူး။ အခု အလိုချင်ဆုံး ကတော့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်နဲ့ အတူအိပ်ဖို့ပဲ။ ဒီတော့ ခများအမျိုးသမီးနဲ့ ခဏအတူအိပ်ခွင့် ပေးနိုင်မလား။ ဒါကျနော့ တောင်းဆိုမှုပါ"
လို့ အဖိုးအိုက အထက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားပြီး မေးမြန်းပါတယ်။
ဒီတော့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတွေဝေသွားပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အတန်ကြာ စဉ်းစားပြီး အမျိုးသားက ဇနီးကို "ချစ်ရေ။ တို့တွေမှာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုရှိနေပြီ။ သေလည်းသေချာနေပြီ။ ဒီမီးခွက်စောင့် နတ်ရဲ့  တောင်းဆိုမှုက မျှတပါတယ်။ မောင် ကတော့ သဲဆုံးဖြတ်အတိုင်းပါပဲ" လို့ ပြောပါတယ်။
ဇနီးဖြစ်သူကလည်း "အင်း။ ဟုတ်တယ်။ အနာဂတ်က သေချာနေပြီပဲ။ မောင် လည်းကြည်ဖြူတယ်ဆိုရင် သဲပေးဆပ်ရဲပါတယ်။ နတ်တစ်ပါးနဲ့ တစ်ကြိမ် တစ်ခါ အတူအိပ်တဲ့အပေါ် မောင်လည်း နားလည်ပေးမယ်ဆို သဘောတူ ပါတယ်"
ဒီတော့ နှစ်ဦးသား တိုင်ပင်ပြီး ခေါင်းညိတ်လိုက်တော့ အဖိုးအိုဟာ အမျိုးသမီးကို အပေါ်ထပ်ခေါ်သွားပြီး သူ့ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောစေပါတယ်။ အတန်ငယ်ကြာပြီးနောက် အဖိုးအိုက အမျိုးသမီးကို မေးပါတယ်။
" ၃၅ နှစ်ရှိပါပြီ"လို့ အမျိုးသမီးက ပြန်ဖြေတော့ အဖိုးအိုက အောက်ပါ အတိုင်း ပြန်ပြောပါတယ်။
"သေသင့်တယ်။ အသက်က ၃၅ နှစ်ရှိပြီ။ ခုထိ အာလာဒင်မီးခွက်စောင့်နတ်တွေ ကို ယုံကြတုန်းပဲ"
သင်ခန်းစာ - လောဘ စိတ်ဟာ ဆင်ခြင်တုံ တရားကို ကျော်လွန် သွားရင် မဖြစ်သင့်တာ ဖြစ်ရ ပါတယ်။